Tesalonianina Voalohany 5:1-28
Ho avy ny andron’i Jehovah (1-5)
“Fandriampahalemana sy filaminana!” (3)
Andao hiambina foana sady hisaina tsara foana (6-11)
5 Raha ny amin’ny fotoana sy ny vanim-potoana, ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratanay aminareo. 2 Fantatrareo tsara mantsy fa ho avy hoatran’ny mpangalatra amin’ny alina+ ny andron’i Jehovah.*+ 3 Rehefa miteny izy ireo hoe: “Fandriampahalemana sy filaminana!”, dia ho tratran’ny fandringanana tampoka izy ireo,+ hoatran’ny vehivavy manaintaina tampoka rehefa mihetsi-jaza. Ary tsy ho afaka handositra mihitsy izy ireo. 4 Fa tsy ao amin’ny haizina kosa ianareo, ry rahalahy, ka hoe ho tampoka aminareo izany andro izany, hoatran’ny mpangalatra tsy nanampo ny ho tratran’ny maraina. 5 Fa zanaky ny mazava sy zanaky ny andro daholo ianareo.+ Tsy zanaky ny alina isika sady tsy zanaky ny haizina.+ 6 Andao àry isika tsy hatory hoatran’ny olon-kafa,+ fa hiambina foana+ sady hisaina tsara foana.+ 7 Fa amin’ny alina no fotoana atorian’izay matory, ary amin’ny alina koa ny mpimamo no manao mamo.+ 8 Fa zanaky ny andro kosa isika, ka aoka hisaina tsara foana, ary andao hatao fiarovan-tratra ny finoana sy ny fitiavana, ary hatao fiarovan-doha ny fanantenana famonjena.+ 9 Tsy nofidin’Andriamanitra mba hiharan’ny hatezerany mantsy isika, fa mba hovonjena+ amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. 10 Maty ho antsika izy,+ mba ho velona miaraka aminy isika, na mifoha na matory.*+ 11 Miezaha àry hifampahery* sy hifanampy foana,+ hoatr’izao efa ataonareo izao. 12 Ary izao no angatahinay aminareo, ry rahalahy: Mba hajao izay miasa mafy eo aminareo, sy mitarika anareo eo amin’ny asan’ny Tompo, ary mananatra anareo. 13 Angatahinay koa ianareo mba ho tsara fanahy be amin’izy ireny sady ho tia azy ireny, noho izay ataony.+ Mihavàna tsara koa ianareo samy ianareo.+ 14 Ampirisihinay koa ianareo, ry rahalahy, mba hampitandrina* an’izay tsy laitra fehezina,+ hampahery ny kivy,* hanohana an’izay malemy, ary hanam-paharetana amin’ny olona rehetra.+ 15 Tandremo sao misy mamaly ratsy ny ratsy,+ fa miezaha foana kosa hifanao soa sy hanao soa amin’ny olona rehetra.+ 16 Mifalia foana.+ 17 Aza mitsahatra mivavaka.+ 18 Mahaiza misaotra amin’ny zava-drehetra,+ fa izany no sitrapon’Andriamanitra ho anareo mpanara-dia an’i Kristy Jesosy. 19 Aza vonoina ny afon’ny fanahy.*+ 20 Ary aza atao tsinontsinona ny faminaniana.+ 21 Hamarino tsara daholo ny zava-drehetra,+ ary aza miala amin’izay tsara mihitsy. 22 Fadio daholo izay zava-dratsy rehetra.+ 23 Enga anie ilay Andriamanitry ny fiadanana mihitsy no hanamasina tanteraka anareo! Ry rahalahy, enga anie ilay toe-tsaina sy fiainana ary vatana iraisanareo ka samy tsy hisy kilema amin’ny lafiny rehetra, sady tsy hisy tsiny mihitsy amin’ny fanatrehan’i Jesosy Kristy Tompontsika!+ 24 Tsy mba mivadika amin’ny teniny ilay miantso anareo, ka tena hanao an’izany rehetra izany izy. 25 Mivavaha foana ho anay,+ ry rahalahy. 26 Arahabao amin’ny oroka masina ny rahalahy rehetra. 27 Miangavy anareo amin’ny anaran’ny Tompo aho mba hovakina amin’ny rahalahy rehetra ity taratasy ity.+ 28 Enga anie ianareo hanehoan’i Jesosy Kristy Tompontsika hatsaram-panahy miavaka!
^ Na: “matory ao amin’ny fahafatesana.”
^ Na: “hifampionona.”
^ Na: “hananatra.”
^ Na: “hampionona ny ketraka.”
^ Na: “Aza sakanana ny asan’ny fanahy aminareo.”